Prime Minista France kewapụrụ iche mgbe ọ nwesịrị nnwale maka COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » Prime Minista France kewapụrụ iche mgbe ọ nwesịrị nnwale maka COVID-19
Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi ala France Jean Castex
Jean Castex, onye gbachara ọgwụ mgbochi, ga-anọrọ ya ụbọchị iri mana ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Mịnịsta ala France, Jean Castex, nwalere ihe dị mma maka COVID-19 n'abalị Mọnde, ụlọ ọrụ ya kwenyere.
Castex, onye gbachara ọgwụ mgbochi, ga-anọrọ ya ụbọchị iri mana ọ na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ ya kwuru na nkwupụta.
Castex nwalere ihe dị mma maka coronavirus ka o si njem gọọmentị na Belgium lọta.
Mịnịsta Ala nke France chọpụtara na nwa ya nwanyị dị afọ 11 nwalere ihe dị mma maka coronavirus mgbe o si Brussels lọta, ebe ya na ya zutere. Onye isi ala Belgium Alexander De Croo na ndị ozi ndị ọzọ.
Ndị ozi Belgium ise, gụnyere Prime Minista De Croo, wepụrụ onwe ya dị ka ịkpachara anya mgbe ọkwa Castex gachara, a ga-anwale ya na Wednesde, ọnụ na-ekwuchitere gọọmentị kwuru.
Castex, 56, erughị eru maka ọgwụ mgbochi nkwado Onye isi ala France Emmanuel Macron akwadola ka ọ bụrụ ihe ọzọ maka mkpọchi mkpọchi n'ahịrị ndị Austria na Germany mebere na nzaghachi ọnụ ọgụgụ ịrị elu nke COVID-19 na kọntinent ahụ.
France ugbu a na-enye nkwado maka naanị ndị dị afọ 65 na karịa, ọ bụ ezie na otu ndụmọdụ agbaala ume ịgbatị ha onye ọ bụla gafere 40.